Yini Ongayilindela Ehhotela I-Transylvania 4? - Ukuzijabulisa
Yini Ongayilindela Ehhotela I-Transylvania 4?
Sithini Isibuyekezo Ngehhotela iTransylvania 4
Yaphela Kanjani Ihhotela iTransylvania 3?
Ingabe lizoba khona Ihhotela iTransylvania 5?
Kulokhu, Ihhotela laseTransylvania ngeke inyukele emasinema. Ngokusho kwe-Variety, isiqephu sesine senganekwane, Ihhotela iTransylvania: Transformania, sizosakazwa emhlabeni wonke nge-Amazon Prime Video. Isithombe se-Universal sizovula iminyango emisha ngokugwema amasinema ngokuphelele okokuqala ngqa selokhu saqala ngo-2012, kanye nokungena esikhundleni sika-Adam Sandler's Dracula.
U-Todd Durham, umbhali wamahlaya, uthuthukise uchungechunge lwemidiya yopopayi ye-Hotel Transylvania. I-Sony Pictures Animation idale izici ezintathu zetiyetha, ifilimu eyodwa eqonde kuvidiyo, amanoveli amathathu ezithombe, namafilimu amathathu amafushane, kanye nochungechunge lwe-TV olubonisa ukukhanya kwe-Disney Channel nemidlalo yamavidiyo eyahlukahlukene.
Ihhotela i-Transylvania yethulwa ngo-Septhemba 2012, ilandelwa yi-Hotel Transylvania 2 ne-Hotel Transylvania 3: Iholide Lasehlobo ngo-September 2015 kanye noJulayi 2018, ngokulandelanayo. Abagxeki banikeze amafilimu axutshwe nezibuyekezo ezinhle, futhi benze imali engaphezu kwezigidigidi eziyi-1.3 emhlabeni jikelele kwisabelomali esiphelele sokukhiqiza sezigidi ezingama-245 zamaRandi. NgoJanuwari 14, 2022, i-Amazon Prime Video izokhipha isiqephu sesine nesokugcina, i-Hotel Transylvania: Transformania.
Funda kabanzi:- Yini Okushisayo Ku-Saturday Night Live Season 46?
Ihhotela i-Transylvania: I-Transformania ithola idethi entsha yokusakaza bukhoma ku-Sony Pictures Animation. Kusukela ngomhlaka-14 Januwari, ukufakwa okulandelayo ku-franchise ye-Hotel Transylvania kuzotholakala ukuze kubukwe ku-Amazon Prime Video.
Ukuthengwa kwenkampani lesi sithombe kuyivumela ukuthi ibaleke ebunzimeni obubangelwe ukuqubuka kwamanje kwe-COVID-19, kanye nokungqubuzana nokuboniswa kokuqala kwesici esinyakazayo i-Addams Family 2 ekuqaleni kuka-Okthoba - womabili amafilimu abehlelelwe ukukhishwa emhlabeni jikelele. Ngisikhathi esifanayo.
Ngokusho kwe-Variety, u-Sony kusolakala ukuthi usezothengisa i-Hotel Transylvania: Transformania e-Amazon ngemali engaphezu kwezigidi ezingu-100 zamaRandi, isivumelwano esizobona isiqephu sesine sochungechunge olusha lwe-Sony Animation lwenza ukusakazwa kwayo kokuqala. Kube nezidumo ngesonto eledlule, ngesikhathi u-Sony ehlela kabusha i-Venom: Let There Be Carnage kusukela ngo-Septhemba 24 kuya ku-Okthoba 15, ukuthi isivumelwano nomunye wabasakazi abakhulu sizoba semisebenzini.
Kusabelomali esiphelele samaRandi ayizigidi ezingu-230 kuphela, i-trilogy eyandulele yenza amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 emhlabeni wonke. Kodwa-ke, ukwanda kwezifo zefomu le-Delta, okubonakala kuyingozi enkulu ezinganeni ezincane, kubangela ukukhathazeka okukhulu ngomdlalo wamahlaya olungele izingane, yize kungekho neyodwa imigomo ye-Covid egunyazwe abantu abangaphansi kweminyaka eyi-12. ukululaza ukusho ukuthi lokhu kuyishwa.
ISIMEMEZELO ESIKHETHEKILE: Maka amakhalenda akho, #IhhotelaTransylvania : I-Transformania izokhishwa emhlabeni wonke ngo @PrimeVideo Januwari 14. pic.twitter.com/jIBEKcIYSR
— Sony Izithombe Ezinyakazayo (@SonyAnimation) Okthoba 6, 2021
Funda kabanzi:- Ifilimu Yamahlaya Amnyama Ongayiphuthelwa?
UVan Helsing uthola into ethi Instrument of Destruction ku-Ericka ozisolayo, futhi ubekela izilo ugibe ephathini yokudansa. Lapho uMavis eqaphela ukuthi uDracula usacasukile ngo-Ericka, ucela usizo lukaJohnny futhi ukhuthaza uyise ukuba akhulume no-Ericka, evuma ukuthi wayekhathazekile ngokuthi uzomshiya, okudambisa ukukhathazeka kukaDrac. U-Ericka uphoqelekile ukuthi avume ukuthi ungumzukulu kaVan Helsing ngemuva kokufika kukaVan Helsing waphusha u-DJ.
I-Instrument of Destruction-indlu ye-casing yephepha lamanothi omculo-yembulwa nguVan Helsing, odlala ingoma edala ukuthi i-Kraken elungile ehlala eduze kwesiqhingi ihlasele izilo. UDracula uzama ukumisa i-Kraken, kodwa uyalinyazwa ngale nqubo. U-Ericka usindisa uDracula eKraken futhi uncenga ukhokho wakhe ukuba amsindise, ememezela uthando lwakhe ngaye. Lokhu kuyamcasula uVan Helsing, obashaye bobabili.
Ukuthulisa i-Kraken, u-Johnny ukhipha igiya le-DJ eliphathwayo futhi adlale umculo oshisayo ukuze avale ingoma ka-Van Helsing. I-Kraken iba nokuzola futhi ijabule ngokuhle njengoba kudlalwa i-Macarena; U-Van Helsing akanawo amandla okumisa ingoma njengoba abantu nezilo ngokufanayo sebeqala ukudansa, ngisho neshidi lomculo, eliziklebhula lize libe yizicucu kule nqubo.
Funda kabanzi:- Idethi yokukhishwa kohlu lwetheminali kanye nezibuyekezo ezengeziwe
Ngokusho kokuqagela, ifilimu yesine ye-Hotel Transylvania kuzoba isitolimende sokugcina se-franchise, esizokhishwa ngo-April 2021. Isitolimende sesihlanu, esibizwa nge-Hotel Transylvania 5: Amaholide KaKhisimusi, sizokhishwa ngo-2024 futhi kuzoba isitolimende sokugcina ehhotela. Uchungechunge lweTransylvania kanye nokulandelanisa kwefilimu yesine, Ihhotela iTransylvania: Transformania (2022).
UJennifer Alaska uqondisa ifilimu, ebhalwe nguGenndy Tartakovsky futhi edidiyelwe nguDerek Drymon. Ngaphandle kuka-Adam Sandler, oshiye i-franchise futhi kwafakwa u-Brian Hull, iningi labalingisi bokuqala bazophinde badlale indima yabo. Umlingisi wezwi owavela kumafilimu amathathu okuqala e-Hotel Transylvania ngeke avele efilimini yesine nanoma yimaphi amafilimu e-Hotel Transylvania azayo.
AbakwaSony Pictures bazokhipha Ihhotela iTransylvania 5 ku-RealD 3D ngoNovemba 27, 2024.
Ihhotela iTransylvania 4 lizotholakala ukuthi lisakazwe ku-Amazon Prime Video emazweni nasezifundeni ezingama-240 ngoJanuwari 14, 2022, ngokusho kwesitatimende sakamuva. Impumelelo ye-Hotel Transylvania Franchise eminyakeni edlule iyazikhulumela, uJennifer Salke, oyi-CEO ye-Amazon Studios, utshele i-Variet.
I-Snowpiercer Isizini 3: Idethi Yokukhishwa Nokuqinisekisa Ukusakaza, Isakhiwo ku-Netflix!
I-Pretty Smart Season 2: Imininingwane Odinga Ukuyazi Manje!